Tag: bilow | Martech Zone
Google Primer: Baro Ganacsi Cusub iyo Xirfadaha Suuqgeynta Dijital ah
Axad, Janaayo 28, 2018 Axad, Janaayo 28, 2018 Douglas Karr
Milkiilayaasha meheradaha iyo suuqleyda ayaa inta badan culeys la saaray markay tahay suuq geynta dijitaalka. Waxaa jira maskax aan ku riixo dadka in ay korsadaan markay ka fikirayaan iibka iyo suuqgeynta khadka tooska ah: Marwalba way isbadelaysaa - madal kastaa waxay mareysaa isbadal xoog leh hada - caqliga macmalka ah, barashada mashiinka, farsamaynta luuqada dabiiciga ah, xaqiiqada dhabta ah, xaqiiqda isku dhafan, xog weyn, xannibaado, bots, Internetka Waxyaabaha… yeesh. In kasta oo taasi u muuqato mid cabsi leh, maskaxda ku hay intaas oo dhan
Sidee Bilaabashadu Ugu Camiraan Bilaabistooda Ugaarsiga Alaabta
Sabtida, Janaayo 7, 2017 Sabtida, Janaayo 7, 2017 Andrew Gazdecki
Nidaamka daahfurka ee bilowga shirkad kasta waa mid caalami ah: la imaado fikrad aad u fiican, sameyso qaab demo ah si aad u muujisid, soo jiidato maalgashadayaasha qaar ka dibna faa'iido u yeelatid marba haddii aad suuqa ku garaacdo alaab dhameystiran. Dabcan, sida ay warshaduhu isu beddeleen, ayay aaladuhuba u leeyihiin. Ujeeddo kasta oo jiil ah ayaa ah in daaha laga rogo hab cusub oo lagu bilaabi karo indhaha bulshada. Waayihi hore waxay ku tiirsanaayeen iibiyeyaasha albaab ilaa albaab, boostada
Pressfarm: Raadi Saxafiyiin wax kaqorta bilowgaaga
Talaado, July 15, 2014 Douglas Karr
Waqtiyada qaarkood, waxaan leenahay dakhli kahor, bilowga maalgashiga oo na waydiiya caawimaad suuq geyn runtiina wax aan qaban karno maaddaama aysan miisaaniyad haysan. Waxaan inta badan siinaa talooyin iyaga oo ka kooban dhiirrigelinta ereyga-afka (aka tixraacayaasha) ama in aan qaadanno waxa yar ee ay haystaan ​​oo ay ku helaan shirkad weyn oo xiriirka dadweynaha ah. Maaddaama nuxurka iyo suuqgeynta gudaha ay u baahan tahay cilmi baaris, qorsheyn, tijaabin iyo xawaare - waxay qaadataa waqti aad u badan waxayna u baahan tahay in badan
Aw, heck Waxaan qiyaasayaa inaan bilaabi doono ganacsi suuqgeyn ah!
Jimco, Diisambar 3, 2010 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Nick Carter
Maxaad heleysaa markii aad isku dhex darto heerka shaqo la'aanta badan iyo bulshada aqoonta sare leh (qaar waxay dhahaan aqoon badan) Dabcan la-taliyayaal. Qaar badan oo iyaga ka mid ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku jirtay suuq-geyn shirkadeed muddo 25 sano ah oo aad nasiib u yeelatay in loo-shaqeeyahaagu kaa siiyo lacag si aad u noqotid "sayid maamul ganacsi" wax yar uun ka hor intaysan joojin wada bixinta lacagtaada… yaa ka wanaagsan inuu maamulo shirkad suuqgeyn ! Waxaa jira kaftan orod ah oo ku jira
Isniin, November 15, 2010 Talaado, Nofeembar 29, 2016 Ball Lorraine
Douglas Karr, wuxuu ka mid ahaa afar garsoore oo naga caawiyey xulista kooxda guuleysatay ee Startup Indy. Wareysigan wuxuu kaga hadlayaa sababta uu ugu lug lahaa, iyo sababta macno u sameyneysa in shirkadaha teknolojiyada ay bilaabaan halkan Indianapolis. Douglas Karr on Xukunka ee StartUp Weekend